किन बाँदर बने युवासंघका नेता ? – Halkhabar kura
५ श्रावण २०७८, मंगलवार १९:५३
किन बाँदर बने युवासंघका नेता ?
नेकपा एमालेको सरकार ढलेपछि युवा संघ आन्दोलनमा छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला र आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको युवासंघले मंगलवार बाँदरको भेषमा आन्दोलन गरेका छन् । मंगलवार उनीहरु बाँदरको भेष बनाएर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा नेकपा एमालेका २२ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । पार्टी निर्देशन विरुद्ध देउवालाई विश्वासको मत दिएका नेता र सांसद विरुद्ध उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल अन्तर जिल्ला विशेष प्रदेश कमिटीको बिस्तारित भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता महेश बस्नेतले नेपाललाई एमाले पार्टी छोडेर जान चेतावनी दिएका थिए । युवासंघका नेता समेत रहेका उनले एमाले छोडेर गए सम्मानजनक विदाई गर्ने बताएका थिए ।
‘तपाईँ एमालेमा बस्न चाहनुहुन्न भने कृपया एमाले छोडनुस्। हामी पुत्ला जलाउँदैनौं। सम्मानजनक बिदाइ गर्छौ। तर, एमालेमा बसेर ब र्वा द गर्नेहरुलाई युवासंघले तह लगाउनै पर्छ,’ उनले चेतावनी दिँदै भने।
Previous एक होला त जसपा ? फुटेमा आधिकारिकता कसले पाउँछ ?
Next भीम रावलको राजीनामा रोक्न १२ सांसदसहित १७ जनाको टोली काठमाडौँमा